महानगरको काम कहिले जाला घाम ! कहिले बन्छन् यी सम्पदा, कहिले बन्छ तीनकुने पार्क ?
अढाइ करोड खर्च भइसकेको रानीपोखरीको निर्माणकार्य सुरु भएको ३ वर्ष बितिसक्दा अझै अलपत्र, जनप्रतिनिधि आए पनि काष्ठमण्डप र तिनकुनेको निर्माणकार्य रोकिएको रोकियै
| 2017-10-05 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | स्थानीय चुनावपछि जनप्रतिनिधिले शासन गरेपनि काठमाडौं महानगरको निर्माणकार्यमा भने कति पनि सुधार आएको छैन ।
जनप्रतिनिधिको चुनावअघिको उत्साहीतता देखेर चुनावपछि त सहरको मुहार नै परिवर्तन हुन्छ होला भन्ने आम मानिसको आशा निराशामा परिणत भइसकेको छ ।
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भनिएझै’ नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि महत्वपूर्ण विकास पूर्वाधार विभिन्न बखेडामा रोकिएको रोकियै छन् ।
चुनाव अघि भने स्काई रेलमार्ग देखि सुरुङमार्ग सम्मको कुरा गर्ने ठूलाठालुले यत्तिका दिनसम्म कुनै पनि पूर्वाधारका काम भने अघि बढाएका छैनन् ।
स्थानीय चुनावपछि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार बोकेपनि नेतृत्व कमजोर हुँदा महानगरको काम गराईको शैली पुरानै भएको आरोप लागिरहेको छ ।
यता महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने अन्योलमा रहेका सबै विकासे काम लामो समय नअड्काएर दशैंपछि तीव्र गतिमा बढाउने बताए । उनले महानगरका विभिन्न महायोजना अब लामो समय अलपत्र नपर्ने जानकारी दिए ।
आयोजनामा रहेका अधिकांश अन्योल जनप्रतिनिधि आएपछि हट्दै गएका छन्, अब भने वर्षाले पनि काम गर्न समस्या गर्दैन, कार्की दावी गर्छन् ।
नागरिक भने महानगरले सुरु गरिसकेको आयोजना अलपत्र रहँदा आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि महानगरले सडकका खाल्डा पुरेको छैन ।
साथै अन्य थुप्रै आयोजना समेत विभिन्न कारण देखउँदै अड्काएर राखिएको छ ।
काठमाडौं भित्रने जोकोहीले हतोत्साहित भएर हेर्न खोज्ने रानीपोखरीलाई राजधानीकै मुटु मानिन्छ । तर, यति महत्वपूर्ण मानिने यस सम्पदा लामो समयदेखि बेबारिसे तलाउका रुपमा परिणत भएको छ ।
यसको निर्माणकार्य गत तिहारमै पुरा हुनुपर्नेमा अगामी तिहारमा समेत पूर्णता नपाउँने देखिन्छ । निर्माणमा लापर्वाही हुँदा अस्तित्व र पहिचान नै गुमाउँदै आएको छ, रानीपोखरिले ।
०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि महानगरले यसको पुननिर्माणको जिम्मा आफैंले लिएको थियो ।
हालसम्म लगभग अढाइ करोड खर्च भइसकेको रानीपोखरीको निर्माण कार्य सुरु भएको ३ वर्ष वितिक्दा पनि अलपत्र नै रहेको छ ।
यता महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने आफूले सय दिनमा गर्ने काम विवरणको ४८ औं नम्बरमा लेखेका थिए ।
जसमा ‘पुरातात्विक मापदण्डअनुसार रानीपोखरको पुननिर्माण तत्काल सुचारु गरिनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । शाक्यले उक्त प्रतिवद्धता भुलेको हाल रानीपोखरीको असरल्ल अवस्थाबाटै स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
स्रोतकाअनुसार पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गर्दै महानगरले यसको निर्माणकार्यमा चरम ढिलाई गरिरहेको छ ।
गफमै सिमित काठमाडौं टावर
पुरानो बसपार्कमा बन्ने भनिएको २९ तले ‘काठमाडौँ टावर’ महानगरमा अड्किएर बसेको अर्को आयोजना हो । उक्त टावर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बन्न लागेको हो ।
सो मोडलमा बन्ने भनिएको टावर गफमै मात्र सिमित भएको छ । अहिलेसम्म १२ तलाको मात्रै नक्सा पास भएको यस टावरको निर्माणकार्य सुरु समेत गरिएको छैन ।
टावर निर्माणकै लागि पुरानो बसपार्कलाइ खुलामञ्चमा सारिएको पनि २ वर्ष पुग्न लाग्यो । बूट मोडलमा यसको निर्माणमा जिम्मा पाएको कम्पनिले वित्तीय स्रोत पनि जुटाउन सकेको छैन भने निर्माण त परको कुरा ।
तर, महानगरले भने कम्पनीलाई न दबाब दिन सकेको छ न स्थानीयको मागलाई सम्बोध नै ।
प्रमुख शाक्यले आफ्नो एक सय एक कामको प्रतिबद्धतामा उक्त टावरबारे भनेका थिए,‘ पुरानो बसपार्कमा प्रस्तावित काठमाडौं टावर निर्माण सम्बन्धमा जनभावनाको कदर गर्दै काम सुरु गरिनेछ ।
तर, काम भने त्यसअनुसार थोरै पनि भएको छैन । यस आयोजना विवादित विषय पनि बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाले उक्त भवन बनाउँदा खनिने बेसमेन्टले रानीपोखरी सुक्ने जोखिम रहेको दाबी गरेका छन् ।
यसबारे कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे मेयर शाक्यले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
खाल्डा विनाका सडक भेट्नै मुस्किल
हाल काठमाडौंको सडकको अवस्था कुन हालतमा छ भनेर बयान गरिरहनै पर्दैन । आम नागरिकले लामो समय देखि भोग्दै आइरहेको विडम्बना हो यो, धुलोधुँवा र पाइलैपिच्छेका सडकका ज्यानमारा खाल्डा ।
काठमाडौंमा खल्डाविहीन सडक भट्नै मुस्किल छ ।
मेयर शाक्यको सय दिने घोषणपत्रको २४ नम्बर बुँदामै उल्लेख छ,‘मेलम्ची आयोजनालगायत अन्य कारणबाट सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गरिनेछ ।’
त्यस्तै २६ नम्बर बुदाँ ‘सडकमा थुपारिएका निर्माण सामग्री हटाइनेछ ।’ यसो भनिए पनि काठमाडौंका मुख्य सडक देखि भित्री सडक नै दयनिय अवस्थामा छन् ।
जसकारण सर्वसाधरणले हैरानी बेहोर्नु परेको छ । वर्षाका कारण सडकको खाल्डा पुर्न नसिकिने भन्दै महानगरले वेवास्ता गरेको थियो ।
अब भने सडकलाई मर्मत गरिने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । हाल काठमाडौंका सडकमा घाम लागे धुलो र पानी परे हिलो अनि जताततै ढल बग्ने गर्दछ ।
राजधानी भन्नै लाज लाग्ने यस ठाउँमा खाल्डे सडककै कारण दैनिकजसो गम्भीर दुर्घटना भइरहेका छन् । नगरवासी भने यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
उनीहरु भन्छन्, मेयर शाक्यको आफ्ना प्रतिबद्धतामा काठमाडौंमा ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने र सडकमा ट्राफिक लाइट र सीसी क्यामेरा जोड्ने भने पनि यो गफमै मात्र सिमित भएको छ ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार दशैं सकिएलगत्तै २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना छ ।
काष्ठमण्डप निर्माणमा विवाद सुरु
महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको अर्को आयोजना हो, काष्ठमाण्डप पुननिर्माण । तर, नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै यो थप अन्योलमा परेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावअघि भने वसन्तपुरका बासिन्दासँग महानगरले आफूले त्यसमा सहयोग गर्ने र स्थानीयकै प्रयासमा काष्ठमाण्डप निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो ।
हाल काष्ठमाण्डप कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । काठमाडौंका प्रमुख शाक्यले आफ्नो १०१ कामका योजनामा ‘काष्ठमण्डप महानगरपालिकाले स्थानीय समुदायको जनसहभागितामा पुनर्निर्माण गर्नेछ’, भनि लेखेका थिए । उनी आएपछि भने महानगरले आफ्ना नीति बदल्यो ।
शाक्यले यसको निर्माण महानगर आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि विवादमा परेको यो निर्णय महानगरले हालसम्म पनि सो विवाद सुल्झाउन सकेको छैन ।
काष्ठमण्डप महानगरले नै बनाउँछ, मेयर शाक्यले दाबी गरे ।
महानगरले काठमाडौंको तीनकुनेलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अघि सारेको पनि ४२ वर्ष वितिसकेको छ ।
०३१ सालमै बस्ती हटाएर खाली गराइएको यस ठाउँको चौर गाईवस्तु चराउने र गाडी सिक्नेहरुको स्थल बनेको छ ।
तीनकुनेको जग्गको मुआब्जा प्रकरण ४० वर्ष पहिलेदेखि सुल्झिन सकेको छैन । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै स्तरीकरण र सौन्दर्र्यीकरण सुरु गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधि आएपछि भने यो काम एक्कासी रोकियो । तीनकुनेमा अलपत्र रहको यस खाली जमिनलाई महानगरले सदुपयोग गरेर आराम गर्न र समय बिताउने योग्यस्थलका रुपमा विकास गर्न लागेको थियो ।
तर, जनप्रतिनिधि आएपछि मुआब्जाकै कारण देखाएर काम अघि बढेको छैन ।
प्रमुख शाक्यले आफ्नो एक सय एक कामको प्रतिबद्धतापत्रको ७९ औं बुँदामा लेखका थिए, ‘तीनकुनेको जग्गाको समस्याको समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ ।’
तर, जनप्रतिनिधिले अघि बढिसकेको काम रोकेर तीनकुने पुन अलपत्रै किन छाडियो भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ भने दिएका छैनन् ।
बिहीबार, १९ असोज ०७४